Eleghi anya echiche nke mmemme maka ụmụaka nwere ike iyi ihe na-adịghị mma new ụfọdụ n’ime anyị. M ga-eche n’echiche na ọgbọ kachasị nke ga-eche ihe kpatara ụmụaka ga-eji chịkwaa. N’aka nke m, a gbara m ume ime nke a ma kwe ka m were klas mmemme site na nwata.
N’ụwa ụwa a jikọtara ọnụ na nke a, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị ikweta na ọgbọ ọ bụla ga-abụ nke na-agụghị nkà na ụzụ. Webbplatsen är inte en apụtaghị na enweghị m ike ịdebanye aha, ma ọ dịkarịa ala, ha kwesịrị ịmara ihe ụfọdụ dị iche iche na ndị ọkachamara na iji ihe ụfọdụ, dị ka kọmputa, smartphones bad ọ.
Dị ka ihe atụ, tụlee LOGO, asụsụ mmemme nke na-eme ka ụmụaka nwee ike ịmalite ịmepụta ihe site na iji obere nnụnụ dị ka ihe osise. Webbplats n’iji iwu dị oke aka dịka atụgharị, azụ, aka nri, aka ekpe na akara iji gosipụta anya, ụmụaka nwere ike ịmụta iji iwu iji dọpụta ihe, dị ka ụlọ.
Ibido LOGO bara ka m bata na egwuregwu kọmputa. N’oge m, kọmputa ndị mmadụ n’oge gboo ezighi ezi na o were ọrụ nka dị ukwuu iji rụọ ọrụ na ha. Enwere m mmasị na ntanetị mbụ site na mmemme, mana agụụ siri ike inwe ike igwu egwuregwu ndị m chọrọ ka ọ duga m n’ịchọpụta amamihe dị omimi site na mkpa.
Ụfọdụ na-ewebata ha na mgbasa ozi ad-hoc, ụfọdụ na-ezite ha maka klas, ebe ndị ọzọ – nke ọma, ha na-ewebata ha na teknụzụ webbplats n’ikwe ka ha na-egwu egwuregwu na mbadamba nkume ha.
D Carol ka Carolyn Taylor, när det gäller New Jersey efter att ha varit ụlọ nke karịrị afọ 20, di, ya gwara ụmụ ha ka ha na emep hata ihe na nwata. Otu nwere mmasị, ebe onye nke ọzọ enweghị mmasị.
Ndị a bụ afọ ndị na-eme nchọpụta maka ụmụ gị na ihe ọ bụla dị ọhụrụ ị na-ewebata ha ka ha wee nwee ohere ịmalite ịnụ ọkụ n’obi. N’iburu nke ahụ n’uche, ka anyị lelee ihe ọhụrụ dị iche iche iji gosi ha ka ha bụrụ: Nhazi usoro!
Icha dị n’ụdị ụfọdụ dịka LOGO, mana ọ ka dịkwuo elu ma nwekwuo ike. Kama echiche dị mfe, Skrapa efter LOGO na ndị steroid, nke a na-eme ka ụmụaka nke taa maara nke ọma karịa nkà na ụzụ karịa n’oge gara aga.
Nri ya ndị na MIT Media Lab, Ọcha abụghị naanị asụsụ mmemme. N’ezie, ọ bụ dum na gburugburu ebe obibi maka ịmụ ihe, na-agụnye ebe online ebe ụmụaka nwere ike ọ bụghị naanị na-amụta ma na-ekere òkè na-atụle mgbasa ozi mmekọrịta dị kauerww,.
Dị ka ndị mmepe si kwuo, a na-emepụta ihe eji eme ihe maka afọ asatọ na 16. Otú ọ dị, site na ahụmahụ nke onwe m, achọpụtara m na ụfọdụ ụmụaka ndị na-eto eto nwere ike ịmegharị ma nwayọọ nyere ha aka.
Nke mbụ, ọrịrị dị na ntanetị ma ọ bụ n’efu. W nwere ike gaa na saịtị Scratch ebe a ma debanye aha akaụntụ n’Ịntanet.
Dị ka ọ bụla asụsụ mmemme (ọbụlagodi nke a chọrọ maka ụmụ), dọọ aka ná ntị na enwere usoro mmụta. Ọdịiche ahụ dị oke na ọtụtụ nhọrọ dị. Mgbe m gavere ihe ndị bụ isi, m ga-atụ aro ka ị gbalịrị ịkụziri nwa gị stegvis.
Dịka ọmụmaatụ, mgbe site na-amalitplats na Ọkachasị (ịchọrọ echere), en na-enye gị ohere na-enweghị ohere na cat catatar. Nyochaa ihe ndị dị mfe, dịka otu esi eme ka cat gị gagharịa gburugburu ihuenyo ahụ. Ọ bụrụ na ị na-eche echiche banyere otu nnụnụ cat moon na-agba agba na Autobahn na mbụ ị na-anwale, ị nwere ike inwe mmechuihu.
Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ịnweta enyemaka webbplats na ncha n’onwe ya, ebe ọ bụ na a na-enwe ntụziaka nzọụkwụ webbplats na nzọụkwụ dị n’ime ncha, ma ọ bụ ịnwere ike ibudata ya Ntuziaka Ọ bụ ezie na ndị mmepe na-eche na Cratch Scratch na onye nduzi ‘na-enye ụzọ dị ụtọ ịmụtakwu ihe’, nkuzi ndị ahụ na-enwe mmekọrịta.
Enwere ọtụtụ ụdị ndebiri nke nwa gị iji gbasaa n’ọkụ – ịchị na-adịghị agwụ agwụ!
Na nkenke, Ọkpụkpọ ihe nkedo kwesịrị inwe ike ịnye ụfọdụ nkà ndị ga-abara ụmụ gị uru n’ọdịnihu ná ndụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndụ nzuzo. Nke a gụnyere;
Nej ihe ngosi, ihe omuma na ihe omuma
Webbplats na ịdọrọ mkpọchi ahụ gafee ihuenyo, iwu mbụ ga-adị. Mgbe nke a gasịrị, gbalịa ịgbakwunye otu ihe, dịka igwu ụda. Ozugbo ebubo abụọ ahụ nọ n’ọnọdụ, en na-ewere ha dịka usoro. Usoro bụ usoro omume nke ga-eme otu mgbe nke ọzọ iji mepụta ụdị akụkọ ma ọ bụ ihe nkiri na ọnọdụ ahụ.
Nanị ihe dị mfe na akwụkwọ na ịtọ ụtọ nke ọma maka ịmalite iji chọpụta mmasị nwa gị. Ekwadoro m na-ekiri ụfọdụ vidiyo ngosi ya na umu gị ka ha na-atọ ọchị. Ụmụaka, ha dị ka eserese. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe niile ị ga-ajụ ha bụ ma ọ bụrụ na ha ga-achọ ịnwa ime nke ahụ n’onwe ha!
Chọpụta-eben ịntanetị na-enye ụdị nke a. Onwe m echere na nke a bụ obere mwute ebe ọ bụ na onye ọ bụla na-agagharị na anya ha limmade ha smartphones. Ma ọ bụ ihe na-akpali mmasị na ndị mmepe emewo ka akụkụ a dị egwu ebe ọ bụ akụkụ dị mkpa nke mmụta. Mee nzu ya ruo na ahụmahụ dị ich iche dị iche iche.
N’ebe a na-edebe ihe ntanetị, ndị òtù nwere ike ịchọpụta ma nyochaa ndị ọzọ na-atụchasị ihe. En na-eme en sida en nakekọrịta ọrụ. Site na nke a, ha nwere ike ịlele, kọwaa echiche ma kwurịta ya, dị ka ụdị nke nkwado nke nnọkọ nkwonkwo. Ọ na-adịwanye elu, ma var ya na ụyọkọ ndị dị afọ asatọ na-ele ya anya na ị ga-enweta ihe m na-ekwu.
"Ndị ọrụ MIT na-arụkọ ọrụ na obodo ahụ iji nọgide na-enwe mmekọrịta enyi na enyi maka agbụrụ nile, agbụrụ, agbụrụ, okpukpe, ọhụụ mmekọahụ, na njirimara nwoke. W nwere ike inyere nwa gị aka ịmụta otú ị ga-esi na-ekere òkè site nyochaa ntụziaka obodo ahụ ọnụ. A na-agwa ndị òtù ka ha kwuo okwu nke ọma ma nyere aka mee ka ụlọ ọrụ weebụ ahụ dị mma site n’ịkọkọ ọdịnaya ọ bụla na-esoghị nduzi obodo. Ndị na-arụ ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ kwa ụbọchị iji jikwaa ọrụ na saịtị ahụ ma zaa akụkọ, site n’enyemaka nke ngwaọrụ ndị dịka CleanSpeak profanity filter ".
Ọ bụrụ na ị bụ ultraparanoid ma ọ bụ naanị enweghị ike ịnọgide na-enwe ike njikọ Ịntanetị n’ụzọ ụfọdụ (Enwere m mmetụta mgbu gị), enwere nhọrọ maka gị. Ọcha nwere nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ dịnụ nke ị nwere ike iwunye na kọmputa gị.
E wezụga na ndị isi obodo na saịtị ahụ n’onwe ya, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị n’ịntanetị iji nyere gị aka n’ịchọgharị nwatakịrị gị ka ịchọọ ụwa dum site na nzuzo. Lee ụfọdụ n’ime ha;
Ọ bụ ezie na m na-eche Skrapa bụ otu n’ime asụsụ mmemme kacha mma maka ụmụaka iji mụọ ihe, ọtụtụ ndị ọzọ dị dịka nhọrọ. N’ebe ụfọdụ, ị na-elekwasị anya n’ịgba chaa chaa na akụkụ anya nke mmụta, ebe ndị ọzọ bụ omenala.
N’ebe sayensị na iwu nọ na-abụkarị ubi mara mma ịbanye, ebe ahịa azụmahịa taa dị nnọọ iche. Ọwa chọrọ ọtụtụ ndị ọkachamara na teknụzụ n’ọdịnihu. Ọbụna nke ka mma, na Ịntanetị nke Ihe, Mmepụta 4.0 na ụzụ na nchekwa nchebe cybersecurity ka ukwuu, ohere ndị a enweghị njedebe.
Ọ bụ ezie na ịmụ Skrapa mmemme nwere ike ghara ejedebe na nwa gị na-abanye na sayensị siri ike, ọ na-enyere alias ịzụlite echiche ziri ezi ma na-akụzi usoro na nhazi ma ọ bụ ikekwe na-eke weebụsat. Onweghi ihe dị na ya ma ọ nwere ike bụrụ ihe na-atọ ụtọ karịa ikiri katuị na telivishọn. Ana m akwado nke ọma ma ọ dịkarịa ala ịnwale iji gosi mmasị na mpaghara a.
Kanske kan konceptet med programmering för barn verka lite konstigt för några av oss.